Bladder Control Check Up in Somali | Continence Foundation of Australia
Bladder Control Check Up in Somali
Hubinta kontaroolka kaadi-haysta
Warqadan yari waxaa weeye inay dadku u diyaargaroobaan baaris kontoroolka kaadi heysta.
Baaris kontoroolka kaadi heysta waxaa ka mid ah waxoogaa su’aalo ah iyo jeegareyn jireed oo dakhtar sameynayo ama shaqaale tababaran oo caafimaad. Baaris waxay caawineysaa in la helo wixii dhibaatooyin ah kontoroolka kaadi heysta ee aad qabto iyo waxyaalaha dhaliyey.waxaa sidoo kale laga yaabaa inay caawiso qorsheynta habka ugu wanaagsan ee loo maareyn karo dhibaatooyinkan. Hubinta kaadi-haystu xanuun ma leh.
Waa maxay doorashooyinkaagu?
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyhay gaarnimada iyo baarista shaqsiyeed. Baahiyahaaga iyo doonistaadu waa in la ixtiraamaa. Dadku waxay xaq u leeyihiin inay yiraahdaan ‘maya’ baarista ama wixii daryeel kale ah.
Doorashooyinka aad dooratay waxaa ka mid ah:
waxaad dooran kartaa nin ama naag si uu kuu jeegareeyo. Weydiiso arintaas markii aad ballanta samaysanayso.
turjumaan waa laguu heli karaa. Turjumaanku wuxuu noqon karaa nin ama naag haddaad doonayso. Ka hubso Adeegga caafimaadka.
waxaad soo wadan kartaa xubin qoys ama saaxiibkaa. Taasi waxay kaa caawin kartaa inaad wanaag ka dareento jeegaraynta.
Maxaad u baahan tahay sameyntooda ka hor baaristooda?
Waxaa lagu weydiisan karaa inaad samaysato xusuus‑qorka kaadi-haysta. Waxaad u baahan tahay inaad haysato xusuus-qor ugu yaraan 3 maalmood ka hor baarista. Waxay kuu raad-raacaysaa siday kaadi-haystaadu u shaqayso maalintii.
Maxaa dhaci doona inta lagu jiro baarista?
Inta lagu jiro, waxaa lagu weydiin doonaa wax ku saabsan cuntadaada, culeyskaaga, caafimaadkaagii hore iyo sida caafimaadkaagu hadda yahay. Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo:
Side bay tahay socodka kaadidaada?
Imisa jeer habeenkii ayaad toostaa markaad u baahato inaad faaruqiso kaadi-haystaada.
Miyaad qaadataa wax daawo ah ama fitimiino ah? Daawooyinku waxay sameyn karaan isbedelo waa weyn sida kaadi heysteenu iyo caloosheenu u shaqeeyaan. Liis ka same dhammaan daawooyinka aad qaadato, ma aha oo kaliya kuwa dhakhtarku kuu qoray. Ogsoonow dhooska aad qaadato iyo sidaad badanaa u qaadato. Waxaa fiican inaad soo qaadato dhammaan daawooyinkaaga oo dhan markii aad aadayso baarista.
Ilaa intee aalkolo ama kafeyn ayaad cabtaa? Cabitaanka aalkolo ama kafeyn badan oo cabitaan ah sida cabitaanka kofeyga iyo kookakoolaha waxaa laga yaabaa inay wareeriyaan kaadi heysta.
Calooshu ma ku fadhidaa? Calool-fadhigu waxay macnahiisu noqon kartaa majiirid si aad u furto mindhicirkaaga. Taasi waxay culays weyn saari kartaa muruqyada miskahaaga. Majiirashadu waxay waxyeellay kartaa muruqyada miskahaaga. Calool-fadhigu wuxuu kaloo kicin karaa kaadi-haysta.
Marna makugu dhacday shil mindhicirkaaga ah? Ma shuuqdaa futadaada (gadaalka dambe)? Muruqyada miskaha oo dabacsan waxay noqon karaan inaad dhuusada wado ama calooshu ku socoto markiii aadan u baahnayn.
Dhibaatada kaadi-haystaada sina ma usaamaysaa nolosha galmadaada?
Su’aalaha haweenka keliya la weeydiiyo:
Wax carruur ah ma leedahay? Uurka iyo cunugyadu la dhalaa waxay wax ka baddeli karaan kontaroolka kaadi‑haysta.
Miyaad gaartey xaaladda dhalmo-dayska? Isbaddallada ku dhaca hormoonada waxay kaadi-haysta ka dhigi karaan mid liidata.
Baarista qaarkeed kuwaas oo loo adeegsan karo hubinta kontaroolka kaadi-haystaada waxaa ka mid ah:
jeegarayn jidheed (Haddii aad sidaas waa Okay tiraahdo).
Saamiga kaadida ayaa laga yaabaa in loo qaado baaritaan ahaan.
Baaritaanka dhiiga ayaa laga yaabaa in loo qaado sonkorta ama dhibaatooyinka kansarka.
Raajo ama ultrasound.
Baaritaanka urodynamics waa baaritaan khaas ah oo lagu eego si uu kuu tuso siday u shaqeyso kaadi heystaadu.
Micne ma leh nooca baaritaanka ah ee lagu weydiiyey inaan sameyso, waxaad weydiin kartaa:
Yaa sameyn doona?
Sidee loo sameyn doonaa?
Sidee bay u caawineysaa?